Ny Fanehoan-kevitr’i Afrika Mpiteny Paortigey Manoloana ny Fahafatesan’i Mário Soares · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2017 13:35 GMT
Mário Soares, filohan'ny Repoblika teo aloha nandritra ny famoriam-bahoaka manohana ny sosialista José Sócrates tamin'ny taona 2009. Sary: Manuel Ribeiro/Tahirin-tsary
Namoy ny iray tamin'ireo endrika miavaka indrindra tamin'ny demokrasia nandritra ny 50 taona farany i Paortiogaly tamin'ny 7 Janoary lasa teo. Tsy fahaverezana ho an'i Paortiogaly fotsiny izany fa indrindra ihany koa ho an'ny Firenena Afrikana miteny Paortiogey amin'ny fomba ofisialy (PALOP). Ho entinay ato amin'ity lahatsoratra ity ireo fanehoan-kevitra momba ny fomba fijerin'ny olona sasany ny fahafatesany any amin'ny firenena PALOP eo amin'ny sehatra isan-karazany.
Atombotsika amin i Mozambika izany , mampahatsiahy antsika eto i Thomas Queface ( mpanoratra ato amin'ny Global Voices) fa i Mário Soares no nanokatra ny làlana ho amin'ny fahaleovantenan'i Mozambika tamin'ny alalan'ny Fifanarahan'i Lusaka tamin'ny taona 1974 :
Maty teo amin'ny faha 92 taonany i Mario Soares. Ilay lehilahy izay nanao sonia niaraka tamin'i Samora Machel ny Fifanarahan'i Lusaka manome an'i Mozambika ny fahaleovantena tamin'ny taona 1974.
Afonso Dhlakama, filohan'ny antoko mpanohitra lehibe indrindra ao Mozambika, miresaka amin'i Mário Soares ho toy ny tena namana, izay nanampy tamin'ny fanafahana ny firenena:
Mahatsiaro ” ny naman'ny vahoakan'i Mozambika ” ny mpitarika Renamo.
Joaquim Chissano no endrika lehibe iray hafa amin'ny politika Mozambikana izay filohan'ny firenena teo aloha matetika mihaona manokana amin'i Mário Soares ary mahatsiaro azy ho toy ny “rahalahy” ankehitriny:
Nampatsiahy i Joaquim Chissano fa nanomboka teo amin'i Mario Soares ny fiaraha-miasa ara-toekarena teo amin'ny Mozambika sy Paortiogaly . Fantaro bebe kokoa …
Manerana ny kaontinanta Afrikana, nisy ihany koa ny fomba fijery mikasika ny fahafatesan'i Mario Soares, izay manasongadina ny vavahadin-tserasera Angola ao amin'ny Twitter:
Nodimandry ny filoha Paortigey teo aloha Mario Soares
Mampatsiahy ny fanambaran'i Mario Soares natao tamin'ny taona 2009 tany Angola ny gazety Folha 8 :
Tena firenena manan-karena izy ary nanomboka niondrika amin'i Angola ny Paortigey izay fihetsika mampalahelo, ary tokony halavirina.
Francisco Graça no avy any Cap Vert fa nianatra tany Lisbon. Vato fototry ny fanafahana ny taniny i Mário Soares hoy ilay mpianatra ;
Nanana anjara asa manan-danja tamin'ny Fahaleovantenan'i Cap Vert i Mário Soares, teo amin'ny fifanarahan'ny Gov Paortigey sy ny PAIGC.
Mihevitra ny Praiminisitra ao Cap Vert , Ulisses Correia da Silva tao amin'ny hafatra navoakan'ny fahitalavitra ao an-toerana fa toy ny iray amin'ireo fitaratra lehibe ho an'i Paortiogaly, ho an'izao tontolo izao sy naman'ny Cap Vert i Mário Soares :
CAP VERT: mihevitra ny Praiminisitra fa toy ny iray amin'ireo fitaratra lehibe ho an'i Paortigaly sy izao tontolo izao sady namana i Mario Soares
Nampatsiahy ny Fikambanana Caué (Sao Tome sy Principe) fa noroahina tao amin'io firenena io i Mario Soares tamin'ny taona 1968 :
Mário Soares – Noroahina tao São Tomé, nosamborina tamin'io taona io noho ny Famotsoran-keloka.
Tsy nino ny fahafatesan'ilay filoham-panjakana i Antonio Miquelino , tsaroany fa mpiara-monina tamin'i Mário Soares ny raibe sy renibeny nandritra ny fitsidihany an'i São Tomé.
Mpiara-monina tamin'i Mário Soares sy Maria Barroso tao Sao Tome ny raibe sy renibeko, tamin'izy tany an-tsesitany.
Tsy mampino ahy hoe maty ianao.